Zingena zingenile izicelo zokuqeqesha amazulu fc - Ilanga News
Home Ezemidlalo Zingena zingenile izicelo zokuqeqesha amazulu fc
Zingena zingenile izicelo zokuqeqesha amazulu fc
ZINGENA zingenile izicelo zomsebenzi womqeqeshi kumaZulu FC njengoba esamisiwe emsebenzini uJosef Vukusic owanikwa ikhefu eliyisipesheli ngaphambi kokuva-lwa kwezwe isigubhukane emuva kokubheduka kweCovid-19.
Kubambe okwesikhashana u-Ayanda “Cobra” Dlamini no-Moeneeb “Slimkat” Josephs. Leli thimba livule kahle kulesi sigqiki lishaya iKaizer Chiefs ngo-1-0 kowe-Absa Premiership eFNB Stadium, eSoweto. Emuva kwalo mdlalo kumiswe yonke into ezwe-ni ngenxa yeCovid-19.
Leli phephandaba lithole ukuthi isikhulu soSuthu, uLunga Sokhela oyimenenja jikelele kule kilabhu, uthola inqwaba yezicelo zomsebenzi ezivela kubaqeqeshi abehlukene. Kuthiwa uSokhela akayingeni eyalezi zicelo, into emqoka kuyena wukuthi uma kuvulwa imidlalo ikilabhu isinde ezembeni.
Umthombo waleli phephandaba uthe: “USokhela unenqwaba yezicelo ezivela kuma-agent ehlukene afuna ukuba aqashe abaqeqeshi bawo. Igama likaDan Malesela oxoshwe yiTS Galaxy liyavela kubantu abagaqele umsebenzi woSuthu. Kodwa-ke uSuthu lumile ekutheni ngeke luqashe muntu okwamanje kuze kube isizini iya-phela. Uma imidlalo yeligi iqhubeka yonke izoqedelwa ngu-Dlamini noJosephs.”
UBrilliant “Slow Jam” Mkhathini wezokuxhumana oSuthwini ebuzwa ngalolu daba, uthe: “Empeleni kakuyena uMalesela kuphela bakhona nabanye abazifakile izicelo bakubeka kwacaca ukuthi bangakuthokozela ukuqeqesha ikilabhu. Izicelo ziqale ukuqhamuka simemezela ukumisa umqeqeshi, baqala bafaka ama-cv.
“Nokho esifuna ukukucacisa wukuthi kasiqashi mqeqeshi nje-ngamanje, kasifuni ukutatazela. Kuzoqhubeka bona laba ababambile okunguDlamini noJosephs kuze kuphele isizini.”
Previous articleI-PSL iphumela obala ngemidlalo
Next articleUzulelwa ngamanqe owe-chiefs